WhatsApp ကို | November 2019
အဓိက WhatsApp ကို
WhatsApp ကိုက c ကို Android-smartphone ကို, iPhone နှင့် PC ကိုမှတ်ပုံတင်လုပ်နည်း
သင်သိသကဲ့သို့, အကောင့်ထဲမှာမှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်သည်နီးပါးမည်သည့်အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာမှဝင်ရောက်ခွင့်ရဖို့ရန်။ ရက်စွဲကိုမက်ဆေ့ခ်ျပို့စနစ်နှင့်အခြားအချက်အလက်မှလူကြိုက်အများဆုံးတဦး - ရဲ့ WhatsApp ကိုအတွက်အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးရန်မည်သို့မည်ပုံကြည့်ရှုကြပါစို့။ cross-platform ကိုပြုလုပ်ကွဲပြားခြားနားသော operating system မြားအောကျတှငျ operating ကိရိယာများပေါ်တွင်တစ်ဦးကို client တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတမန် VatsAp တပ်ဆင်ရန်ဖြစ်နိုင်သမျှသည်ကွဲပြားခြားနားသောဆော့ဖ်ဝဲကိုပလက်ဖောင်း၏အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်လိုအပ်သည့်အခါ, မှတ်ပုံတင်ရန်အရေးယူတစ်ဦးခြားနားချက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
Android, iOS နဲ့ Windows များအတွက် WhatsApp ကိုအတွက်အဆက်အသွယ်ထည့်သွင်းခြင်းသို့မဟုတ်မဖျက်ပစ်
အခမဲ့စာသားရဲ့အခွင့်အလမ်းပေး WhatsApp ကိုလျှောက်လွှာ, အသံနှင့်ဗီဒီယိုဆက်သွယ်ရေးကမ္ဘာတဝှမ်းတစ်အတော်လေးမြင့်မားတဲ့လူကြိုက်များပါတယ်။ ယခုပင်လျှင်ကြီးမားတဲ့အသုံးပြုသူအခြေစိုက်စခန်းအဆက်မပြတ်ဒီ messenger ကိုတစ်ဦးအထူးသဖြင့်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ဘယ်လိုမသိသောသူအသစ်ရောက်ရှိလာသောနှင့်အတူ updated ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဆောင်းပါးထဲမှာအကြှနျုပျတို့ကို Windows နှင့်အတူ PC များပေါ်တွင်ပေါင်းထည့်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ် Android နဲ့ iOS ကနှင့်အတူမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်ပေါ်တွင်သင်၏လိပ်စာစာအုပ် VatsAp တစ်ဦးအဆက်အသွယ်ပယ်ဖျက်ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မယ်။
အခြားချက်တင်ကမပို့လျှင်တက်ကြွစွာဆက်သွယ်ရေး VotsAp စဉ်အတွင်းအမှတ်တမဲ့တစ်ဦးအမှားလုပ်, အခြားပါတီသတင်းစကားမဟုတ်ပါဘူးပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ ဤအမှုကိစ္စမဆိုအတွက်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်အိမ်မှာဒါပေမယ့်လည်းလက်ခံရရှိသူ၏တမန်ထဲမှာမသာဖြစ်ကြ၏မလိုအပ်သော "မက်ဆေ့ခ်ျ" ကိုဖယ်ရှားရန်ဖြစ်ပါသည်။ လိုအပ်သော, သင်တန်း, သူ့ထံမှဖုန်းကိုမရွေးဖို့ - အရာအားလုံးမဟုတ်အချို့သောတစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံမပါဘဲပေမယ့်, အများကြီးပိုလွယ်သည်။
လက်ပ်တော့အပေါ် WhatsApp ကို install လုပ်နည်း
Display စမတ်ဖုန်းသေးငယ်လွန်းပါသလဲ ဒါဟာ WhatsApp ကိုအလုပ်လုပ်ဖို့ inconvenient သလဲ? တခြားဘာအကြောင်းပြချက်တွေပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ဦးလက်ပ်တော့အပေါ်တစ်ဦးလူကြိုက်များ messenger ကိုမြဲမြံစေလိုတဲ့ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သနည်း အများစုမှာဖွယ်ရှိ, ပိုရှိပါတယ်။ ယခုမူကားကဘာလှုံ့ဆျောမှုအရေးမထားဘူး။ အဓိကအရာဟာအချိန်ကြာမြင့်စွာဤပြဿနာကိုမှအဖြေတစ်ခုရှိကွောငျးဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ထဲကရုတ်တရက်တဦးတည်းမသင့်လျော်ပါလိမ့်မယ်အခါရည်မှန်းချက်, အောင်မြင်ရန်နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်တဲ့အခါ laptop ကို Vatsap ကောင်းပြီအပေါ်ကို install များအတွက်နည်းလမ်းများ။
Android, iOS နဲ့ Windows ပေါ်မှာ WhatsApp ကိုအတွက်စာပေးစာယူဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို
တက်ကြွခြင်းနှင့်ရေရှည်အသုံးပြုခြင်းကို VotsAp တမန်နှင့်အတူကမလိုအပ်တဲ့နှင့်အသုံးမမက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်သတင်းထောက်များရှေ့တွင်၏အတော်လေးတွေအများကြီးဖြစ်ပါတယ် "ကယ်တင်" နိုငျသညျ။ လူအတော်များများဟာရိုးရိုးကအာရုံစိုက်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ဒေတာတန်ဖိုးများရှိခြင်းမဖယ်ရှားပစ်ရမယ့်အချိန်မီထုံးစံ၌လေ့ရှိသောသူတို့သည်သူတို့အအသုံးပြုသူများကရှိပါတယ်။ Windows ကို - ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဆောင်းပါး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟာမတူညီတဲ့ Operating System နဲ့ devices များပေါ်စကားလက်ဆုံ WhatsApp ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်မည်သို့မည်ပုံအကြောင်းပြောဆိုကြလိမ့်မည်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
အဘယ်သို့ငါက Android သို့မဟုတ် iPhone ကိုက c သင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာ WhatsApp ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်ဘူး
ဆော့ဖ်ဝဲအသစ်ပြောင်းခြင်း - ဆိုခေတ်မီစက်ကိရိယာကိုအသုံးပြုခြင်း၏အရေးပါသောအသှငျအပွငျ။ client ကိုလျှောက်လွှာ၏ဗားရှင်း updated လူကြိုက်များလက်ငင်းတမန်တို့ကိုနှငျ့ ပတျသကျ. သူ့အလုပ်၏တည်ငြိမ်မှုကိုသေချာနိုင်ပါတယ်မသာနှင့်အသစ် features တွေရဖို့, ဒါပေမယ့်လည်းအသုံးပြုသူရဲ့လုံခြုံရေးအဆင့်အတန်းကိုထိခိုက်ခြင်း, န်ဆောင်မှုများမှတဆင့်သတင်းအချက်အလက်ထုတ်လွှင်။
အန်းဒရွိုက်-စမတ်ဖုန်းနဲ့ iPhone ပေါ်မှာ WhatsApp ကို Install လုပ်နည်း
တမန်တို့ကိုယနေ့အဲဒီကိရိယာအခွင့်အလမ်းများကိုအများကြီးယင်း၏အသုံးပြုသူများကိုသုံးပါနှင့်ကမ်းလှမ်းရန်တကယ်လွယ်ကူပြီးဖြစ်သောကြောင့်, အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူးရသောအများဆုံးမကြာခဏအသုံးပြုကြသည် applications များ, စမတ်ဖုန်းပိုင်ရှင်များ၏စာရင်းထဲတွင်ဂုဏ်အသရေ၏နေရာတစ်နေရာသိမ်းပိုက်။ ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အင်တာနက်မှတစ်ဆင့်သတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်များအတွက်ရေပန်းစားဝန်ဆောင်မှု - ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုတာဝန်ခံအခမဲ့သင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာ install လုပ်ထားတဲ့နှင့် WhatsApp ကို-client ကိုလျှောက်လွှာကိုအသုံးပြုရန်အဆင်သင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြပါစို့။
Messenger ကို WhatsApp ကိုအတွက် status မက်ဆေ့ခ်ျ
အသုံးပြုသူများသည်မကြာခဏ tick ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိချင် WhatsApp ကိုမာစတာ function ကိုကတည်းက, ချက်ချင်းတမန်ကနေတဆင့်လှေတျတျောမူမက်ဆေ့ခ်ျ၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်လာပါသည်။ ကျနော်တို့ကအင်တာနက်ကနေတဆင့်ဆက်သွယ်ရေး၏လူကြိုက်အများဆုံးနည်းလမ်းများထဲမှတစ်ခုစီကှကျဖို့တာဝန် status အများ၏ system ကိုသယ်ဆောင်အဖြစ်အစီရင်ခံစာများကိုဖတ်ရှုခြင်းကသူ့တင်ပါတယ်ဖို့မက်ဆေ့ခ်ျ၏ပေးပို့ခြင်းအပေါ်တစ်ဦးပိတ်ပင်မှုများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုစဉ်းစားလက်တွေ့ကျတဲ့ဘာအကြိုး, ဒီလမ်းအတွက်ပေးပို့သူသတင်းအချက်အလက်ညွှန်ပြသောအရာကိုဝန်ဆောင်မှုကိုနားလည်ပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဦးဖုန်းပေါ်မှာ WhatsApp ကိုနှစ်ခုမိတ္တူကို install လုပ်နည်း
ကောင်းကင်တမန်၏များစွာကိုတက်ကြွစွာအသုံးပြုသူများသည်အတွက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်မူလတန်းနှင့်အလွန်အရေးကြီးသောအပေါ်ခေတ်သစ်လူအားနေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာလက်ခံရရှိဖြစ်ကြောင်းအချက်အလက်များ၏ကြီးမားစီးဆင်းမှု၏ဂုဏ်ထူး, အရေးပေါ်တာဝန်ကြောင့်။ , တဦးတည်းစမတ်ဖုန်းနှစ်ခုမိတ္တူကို install လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် WhatsApp Android နှင့် iOS - လူကြိုက်အများဆုံးမိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းများအကြားကော်ပီ functioning တစ်ချိန်တည်းမှာနှစ်ခု applications များ၏ပြင်ဆင်မှုအဘို့နည်းလမ်းများ။
Android, iOS နဲ့ Windows ပေါ်မှာ WhatsApp ကိုကနေတဆင့်ဓါတ်ပုံ Send
WhatsApp ကိုအသုံးပြုသူများကတဆင့်သတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်မှုများ၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်မကြာခဏသည်သူ၏တင်ပါတယ်မှကွဲပြားခြားနားသောရုပ်ပုံများကိုပေးပို့ခြင်း၏လိုအပ်ချက်နှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်နေကြသည်။ သင့်ရဲ့အာရုံကိုကမ်းလှမ်းပစ္စည်းသည်အခြားကောင်းကင်တမန်၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှင့်ရက်စွဲကို operating system မြားမှလူကြိုက်အများဆုံးသက်ဆိုင်ဖို့လုံးဝနီးပါးမဆိုပုံရိပ်ပို့ပေးရန်နည်းလမ်းများဖော်ပြထားတယ် - Android, iOS နဲ့ Windows ။
https://termotools.com my.termotools.com © WhatsApp ကို 2019